Argo Casino dia manolotra bonus fandraisana be hatramin'ny PLN 600 ary fampiroboroboana maro
Fandalinana Argo Casino
Antsipirihany Argo Casino
Tombontsoa Argo Casino
Microgaming, NetEnt, Betsoft, NextGen Gaming, 1x2Gaming, Genre Gaming, Quickspin, Yggdrasil Gaming, Rabcat, BGAMING, Igaming2go, Ezugi, Playson, Amatic Industries, Betdigital, Big Time Gaming, Elk Studios, Endorphina, Casino Technology, Technology Technology Lalao, Habanero, Teknolojia milalao Ainsworth, Lalao Pragmatic, Iron Dog Studios, Side City Studios, Spinomenal, Gameva, Thunderkick
Ny Argo Casino dia manolotra fidirana amin'ireo mpamokatra lalao tsara indrindra, ohatra: Netent, Yggdrasil, Microgaming, Ezugi, QuickSpin, Blueprint, Habanero, Big Time Gaming, Pragmatic Play ary maro hafa. Misy mihoatra ny milina 1500 slot, casino live, roulette, blackjack amin'ny lafinao. Vitsy? Mpanao boky sy taratasim-piainana!
1. Tombontsoa fandraisana: 100% fandraisana bonus do 600 PLN. 30 faran'izay kely indrindra PLN
2. Valisoa isan-kerinandro: Makà vola 15% vola azo raikitra amin'ny fatiantoka aterak'izany mandritra ny herinandro hatramin'ny PLN 1000. PLN 60 ambany indrindra.
3. Herinandro mafana: afaka mahazo bonus 40% ianao isaky ny faran'ny herinandro hatramin'ny PLN 500 amidy voalohany amin'ny asabotsy na alahady mankany amin'ny 500 PLN. PLN 100 ambany indrindra.
4. 30% famerenana isan-kerinandro: Manaova tahiry farafahakeliny 100 PLN mandritra ny herinandro (alatsinainy zoma) ary ankafizo ny bonus 30% hatramin'ny 1000 PLN. PLN 100 ambany indrindra.
5. Bonus fety amin'ny alina: Alatsinainy - Zoma (00:00 - 05:00 GMT +2) Bonus 50% apetraka. Vola farafahakeliny 1000 PLN. PLN 120 ambany indrindra.
6. POINTSY LOYALTY ARGOCASINO: Arakaraka ny milalao ny lalao tianao indrindra, ny teboka azo antoka dia azonao.
»Manomboha milalao ao amin'ny Argo Casino